Venice, Floating City | NU MYAT AROUND THE WORLD
Posted on November 18, 2017 by Nu Myat
ကမ္ဘာကျော် ရေပေါ်မြို့လေး ဗင်းနစ်_Venice
ရေပေါ်မြို့လေး၊ အချစ်မြို့တော်၊ မျက်နှာဖုံးမြို့တော် စသဖြင့် အမည်တွင်တဲ့ ဗင်းနစ်မြို့လေးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှဆုံးမြို့တွေထဲက တစ်မြို့ပါ။ တူးမြောင်းတွေ၊ တံတားတွေ အဆောက်အအုံတွေနဲ့ မြို့လေးရဲ့ နေရာတိုင်းဟာ လေဟာပြင်ပြတိုက်လို ကြည့်လို့မကုန်နိုင်လောက်အောင်လှပါတယ်။ ရေပေါ် Venice မြို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်တွေက အများကြီးပဲ… သိသလောက်ပြောပြမယ်လေနော်…
ဥရောပတိုက်တောင်ဘက်ရှိ အီတလီနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ ဗင်းနစ်မြို့က ရေပေါ်မြို့ဆိုပေမဲ့ ကမ်းခြေမြို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ပင်လယ်နဲ့ နီးပေမဲ့ ပင်လယ်ထဲမှာ ရှိတာလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ပင်လယ်ထုံးအိုင်လို့ခေါ်ရမယ့် ပင်လယ်နဲ့ဆက်နေတဲ့ ရေပြာအိုင်ကြီးထဲမှာ ရှိနေတာပါ။ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကျွန်းတန်းတွေက ပင်လယ်ကို ခြားထားပေးလို့ အိုင်လိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထဲမှာ ရှိနေတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း မြို့ထဲတူးမြောင်းတွေထဲ စီးဆင်းနေတဲ့ ရေတွေက ကြည်လင်လှတဲ့ စိမ်းပြာရောင် ပင်လယ်ရေတွေ ဖြစ်နေတာပါ။ ဒီရေစိမ်းစိမ်းလေးတွေကြောင့်လည်း မြို့အလှ ပိုတိုးနေတာပေါ့။
ရေပေါ်မြို့ဆိုတဲ့အတိုင်း မြို့လေးဟာ လူလုပ်ကျွန်းပေါင်း ၁၁၈ကျွန်းပေါ်တည်ထားတာဖြစ်ပြီး ကျွန်းတွေကို ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ တံတားပေါင်း ၄၀၀ကျော်ရှိပါတယ်။ မြို့လေးမှာ ကားလမ်း ရထားလမ်းဘာဆိုဘာမှ မရှိပါဘူး။ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ သွားချင်ရင် လမ်းလျှောက်ရင်လျှောက်၊ မလျှောက်ရင် ရေလမ်းကနေသွားမှ ရမှာပါ။ ကျွန်းတွေကြားမှာရှိတဲ့ တူးမြောင်းတွေကနေ လှေတွေ၊ စက်လှေတွေ၊ သင်္ဘောတွေနဲ့ သွားကြရပါတယ်။ တက္ကစီတွေ၊ ဘတ်စ်ကားတွေ၊ အရေးပေါ်ယာဉ်တွေကအစ ရေပေါ်ရှပ်ပြေးယာဉ်တွေပါ။ ဗင်းနစ်မြို့ကို သွားချင်ရင် ကုန်းပေါ်ရှိမြို့ဘက်နဲ့ ကျွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ ရထားလမ်းရှိတော့ ရထားနဲ့ သွားလို့ရပါတယ်။ ကုန်ပေါ်ရှိမြို့ဘက်အခြမ်းမှာတော့ မာကိုပိုလိုလေဆိပ်ရှိပါတယ်။ နုမြတ်တို့သွားတုန်းကတော့ နှစ်ခေါက်လုံး ရထားနဲ့သွားခဲ့တာပါ။ ပထမတစ်ခေါက်က ရောမမြို့ကနေ သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်ခေါက်ကကျတော့ အီတလီမြို့တော် မီလန်ကနေသွားခဲ့တာပါ။
အကျယ်အ၀န်းစုစုပေါင်း ၁၆၀စတုရန်းမိုင်သာရှိတဲ့ ဗင်းနစ်မြို့ဟာ အခုချိန်မှာ အရမ်းကို ကဗျာဆန်တဲ့မြို့၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ အများအပြားလာရောက်တဲ့မြို့၊ လူကုံထံတွေ လာရောက်အပန်းဖြေတဲ့ မြို့ဖြစ်ပေမဲ့ မြို့စတည်ခဲ့တုန်းကတော့ ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်မျိုးပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ကျော်က ရောမအင်ပါယာအရေးနိမ့်လာတဲ့အခါ အီတလီလူမျိုးတစ်စုဟာ ရန်သူလက်ပုန်းကွယ်တဲ့အနေနဲ့ လူသူအရောက်အပေါက်နည်းတဲ့ ဒီဗင်းနစ်မြို့ဖြစ်လာမယ့်ကျွန်းပေါ်ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြတာပါ။ ရေထဲမှာရှိတော့ တော်ရုံလာတိုက်ခိုက်လို့လည်း မရနိုင်ဘူးဆိုပြီး အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထူးဆန်းတယ်နော်။ အကြောက်တရားတွေနဲ့တည်ခဲ့တဲ့ မြို့က အခုအခါမှာတော့ အလှတရားတွေ ပေါင်းဆုံနေရာ ဖြစ်လို့နေတာ။
နောက်ထပ်ထူးဆန်းတာတစ်ခုက ဗင်းနစ်မြို့ဟာ ကျွန်းပေါ်ဒီအတိုင်းအိမ်ဆောက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သန်းချီတဲ့ သစ်လုံးတွေပေါ်မှာ မြို့တည်ထားတာပါတဲ့။ တကယ်ကို အံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။ မူလကျွန်းပေါ်မှာ သစ်လုံးတွေကို စေ့နေအောင် ဒေါင်လိုက်စိုက်ထားပြီး အပေါ်ကနေရွှံ့လောင်းကာ မြို့ကွက်ဖော်ပြီး အိမ်တွေဆောက်ခဲ့တာတဲ့လေ။ ရေပေါ်မြို့ဆိုတော့ ရေလမ်းအသုံးပြုရအောင် တူးမြောင်းတွေပါ မြို့ဖော်တဲ့အခါ ထည့်ဖော်ထားခဲ့တာတဲ့။ ရန်သူတွေလာတိုက်ရင် မျက်စိလည်အောင်လည်း လမ်းတွေကို ရှုပ်ရှက်ခတ်အောင် ဖောက်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗင်းနစ်မြို့မှာ လိပ်စာရှာရသိပ်ခက်ပါသတဲ့။ ကုန်းပေါ်ကလမ်းတွေကလည်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေပါ။ လူနဲ့မြင်းလှည်းတွေ သွားလို့ရလောက်တဲ့ အထိပဲ ကျယ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကျဉ်းဆုံးလမ်းတောင် အဲ့မှာ ရှိပါတယ်။ Calleta လို့ခေါ်ပြီး ၅၃စင်တီမီတာသာကျယ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ တစ်နှစ်ကို ၁၅သန်းကျော်လာပေမဲ့ မြို့နေလူဦးရေကတော့ နှစ်ပေါင်း ၅၀အတွင်း ၁သိန်း၂သောင်းကနေ ၆သောင်းအထိလျော့ကျလာပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း ၂၀၃၀ခုနှစ်လောက်ကျရင်တော့ ဒေသခံတွေမရှိသလောက်နည်းသွားပြီး ခရီးသည်တွေနဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေပဲရှိတဲ့ တစ္ဆေမြို့ဖြစ်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ဒေသခံတွေ ဗင်းနစ်မြို့ကိုစွန့်ခွါရတဲ့ အကြောင်းတွေကတော့ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတွေ ထိန်းသိမ်းရာမှာ အကုန်အကျများခြင်း၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ အလွန်များခြင်းအပြင် မြို့ရေလျှံခြင်းကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို ၄ကြိမ်ပင်လယ်ရေမြင့်တက်လေ့ရှိပြီး အဲဒီအချိန်ကျရင် တစ်မြို့လုံးနီးပါးရေလျှံတက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗင်းနစ်မြို့လေးဟာ တစ်နှစ်ကို ၂မီလီမီတာရေအောက်ထဲ နိမ့်ဝင်နေပါသတဲ့။ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုတွေသာ မလုပ်ဘူးဆိုလျှင်ဖြင့် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါ ဗင်းနစ်မြို့လေး ရေအောက်ရောက်သွားမယ့်ကိန်းပါ။ ယခုအခါမှာ ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်မခံရအောင် ကြံဆလုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်လို့ ဗင်းနစ်မြို့ရဲ့ အနာဂတ်လေး သာယာလှပပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
Venice မြို့ရဲ့ လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေကြားထဲ တစ်လမ်းဝင်တစ်လမ်းထွက်။ တံတားတစ်စီးပြီး တစ်စီးဖြတ်ရတာ ရသတစ်မျိုးပါပဲ။ လမ်းလေးတွေက ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတော့ မှန်းဆလို့မရပါဘူး။ လမ်းပျောက်သွားရင်ပိုတောင်ကောင်းပါသေးတယ်။ တော်ရုံလူတွေ မမြင်ရတဲ့ မြို့အလှတွေ မြင်ရတာပေါ့နော်။ အဆောက်အအုံတိုင်းက သူ့ဟာသူလှနေတာဆိုတော့ အကုန်လုံးက ကြည့်ချင်စရာပါ။ နုမြတ်တို့တုန်းက မြို့အ၀င်ဘူတာရုံကနေ မြို့လည် စိန့်မာကိုရင်ပြင်ဆီ လမ်းလျှောက်သွားတာ အရမ်းသဘောကျတာပဲ။ လမ်းတလျှောက် ဆိုင်လေးတွေက ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ ၀င်ငမ်းလိုက်၊ ရိုးရာမုန့်တွေ ၀ယ်စားလိုက်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်နဲ့ နာရီဝက်လောက်ပဲ သွားရမယ့်အကွာအဝေးက ၃နာရီလောက်ကြာသွားတယ်လေ…
ဗင်းနစ်မြို့ရဲ့ သင်္ကေတကိုပြောပါဆိုရင် မျက်နှာဖုံးတွေအပြင် Gandola လို့ခေါ်တဲ့ လူလှော်လှေလည်းပါပါတယ်။ သစ်အမျိုးအစား၈မျိုးနဲ့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ လှေကြီးရဲ့ ပုံသဏ္ဏာန်က ဗင်းနစ်မြို့ကို ကိုယ်စားပြုထားပြီး မြို့အနှံ့တူးမြောင်းတလျှောက် ချောင်ကြိုချောင်ကြားနေရာတွေပါ လှော်ခတ်ပေးလို့ ဗင်းနစ်ရောက်သူတိုင်း မဖြစ်မနေစီးလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဂန်ဒိုလာလှေတွေက ဗင်းနစ်မှာပဲရှိတဲ့လှေတွေပါ။ ဗင်းနစ်မှာတောင် အစီး ၃၀၀ကျော်ပဲရှိသတဲ့လေ။ Gandola လှေမောင်းသူတွေဟာလည်း လိုင်စင်ရှိမှမောင်းလို့ရတာပါ။ လှေမောင်းသူပေါင်းကလည်း ၄၀၀လောက်ပဲရှိပါသတဲ့။ လှေမောင်းသူတွေက အဖြူအပြာကန့်လန့်စင်းတီရှပ်ပေါ် ဖဲပြားအနီလေးတတ်ထားတာ။ ဗင်းနစ်မြို့ရဲ့တူးမြောင်းတွေအကြား တစ်လမ်းဝင်တစ်လမ်းထွက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြို့စားကြီးတိုင်းခန်းလှည့်လည်နေသလိုတောင်ထင်ရမှာ။ တစ်ခါတလေ လှေပေါ်မှာ အီတလီ အော်ပရာသီချင်းကြီးတွေတောင်ဆိုပြသေးတယ်။ စုံတွဲလေးတွေ စီးရင် so romantic ပေါ့။ တံတားအောက်ကဖြတ်သွားတိုင်း Kiss ပေးရင် အချစ်ရေးကံကောင်းတယ်ဆိုပဲ။
Gandolaက တစ်စီးကို ယူရို ၈၀ပေးရတယ်။ ၆ယောက်ထိစီးလို့ရတယ်။ ၁ယောက်ပဲရှိရှိ ၆ယောက်ပဲရှိရှိ ၈၀ပါ။ မိနစ်၄၀ကြာ မောင်းပို့ပေးတယ်။
ဗင်းနစ်မြို့ရဲ့ တူးမြောင်းပေါင်း၁၇၇ခုထဲ တော်ဝင်တူးမြောင်းကြီးက အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး မြို့ကို နှစ်ခြမ်းခွဲထားပါတယ်။ Sပုံသဏ္ဏာန်ရှိတဲ့ တူးမြောင်းကြီးထဲ ဘတ်စ်သင်္ဘောတွေ၊ ရေပေါ်taxi တွေ ပြေးဆွဲနေတာအများကြီးပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်။ တူးမြောင်းတစ်ဖက်တစ်ခြမ်းမှာလည်း သင်္ဘောဆိပ်တွေ ခပ်စိပ်စိပ်ရှိလို့ သွားရအဆင်ပြေပါတယ်။ တိုးရစ်တွေအနေနဲ့ တစ်နေ့တာ လက်မှတ်ဝယ်ထားပြီး ကိုယ်ဆင်းချင်တဲ့နေရာမှာ ဆင်းလိုက်တက်လိုက်နဲ့ လျှောက်လည်လို့ရတယ်။ တစ်နေ့တာလက်မှတ်က တစ်ယောက်ကို ယူရို ၂၀ပါ။ တစ်ကြောင်းပဲ စီးမယ်ဆိုရင်တော့ ယူရို ၇.၅ကျပါမယ်။
Rialto တံတားပေါ်က ရှုခင်းကြည့်မယ်
ကျွန်းပေါင်း ၁၁၇ကျွန်းရှိတဲ့ Venice မြို့မှာ တံတားပေါင်း ၄၀၀ကျော်ရှိပါတယ်။ မဟာတူးမြောင်းကြီးကိုဖြတ်တဲ့ အဓိကတံတားကြီး ၄စင်းရှိပြီး Rialto ဆိုတဲ့ တံတားကြီးကတော့ နာမည်အကြီးဆုံးပါ။ မြို့ရဲ့ စည်ကားတဲ့နေရာမှာရှိသလို တံတားပေါ်က မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းကလည်း အလွန်လှပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက တံတားပေါ်မှာ ဆိုင်ခန်းတွေလည်းရှိနေတာပါ။ အဲ့ဆိုင်တွေမှာတော့ မ၀ယ်နဲ့ပေါ့။ တခြားထက်ဈေးပိုကြီးလို့။
ဗင်းနစ်ရောက်ရင် မသွားမဖြစ်ကတော့ မြို့စတည်တဲ့နေရာရှိ စိန့်မာကိုရင်ပြင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်ညားထည်ဝါလှတဲ့ အဆောက်အအုံတွေ ၀န်းရံထားတဲ့ ရင်ပြင်ကျယ်ကြီးက တကယ်ကို ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာပါ။ စိန့်မက်ခ်နာရီစင်၊ Doge’s Palace ဒေါဂျီနန်းတော်ကြီးနဲ့ စိန့်မက်ခ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးရဲ့ ဗိသုကာလက်ရာတွေကလည်း အံ့မခန်းဖွယ်ရာပါ။ ရင်ပြင်ကျယ်တော့ ခိုလေးတွေလည်းအများကြီးပဲ။ ခိုလေးတွေ အစာက တစ်ထုပ်ကို ၁ယူရိုနဲ့ရောင်းနေကြတယ်။ စိန့်မက်ခ်ဘုရားကျောင်းကြီးနောက်ခံထားပြီး ခိုစာကျွေးနေတဲ့ ပုံက Venice မှာ Tourist တွေရိုက်လေ့ရှိကြတဲ့ပုံပါ။ ရင်ပြင်ကြီးကနေ မြင်ရတဲ့ Gandola လှေလေးတွေ အစီအရီစိုက်ထားတဲ့ ကမ်းစပ်မြင်ကွင်းကလည်း နာမည်ကျော်ပါတယ်။ နေ၀င်ချိန်ရှုခင်းကလည်း တအားလှဆိုပဲ။
စိန့မာကို ရင်ပြင်အလယ်က ခေါင်းလောင်းမျှော်စင်ကြီးက ဗင်းနစ်မြို့မှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်လို့ မျှော်စင်ပေါ်ကနေ တစ်မြို့လုံးကို လှမ်းမြင်ရပါတယ်။ နုမြတ်တို့သွားတုန်းက တက်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်။ တစ်ယောက်ကို ၈ယူရိုပေးရတယ်။ တစ်မြို့လုံးကို အပေါ်စီးကနေမြင်ရတာဆိုတော့တန်ပါတယ်။
မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ ဒီကျွန်းလေးက အိမ်လေးတွေရောင်စုံနဲ့ ချစ်စရာလေးပါ။ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ အရမ်ကောင်းမှာပါ။ အဲ့ကျွန်းကိုသက်သက်သွားတဲ့ half day tour တွေတောင်ရှိပါတယ်။ public transport နဲ့လည်း သွားလို့ရတယ်။ နုမြတ်တို့တော့ မရောက်ခဲ့လိုက်ရဘူး။
ပင်လယ်နားကမြို့ဆိုတော့ ပင်လယ်စာတွေပေါတဲ့ Venice ရောက်ရင် စားကြည့်သင့်တဲ့ အစားအစာကတော့ စပါကတီခေါက်ဆွဲ မဲမဲလေးပါ။ မှင်ရည်ခေါက်ဆွဲလို့ခေါ်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို Squid ink Spaghetti အီတလီလို Spaghetti al nero de Sepia လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပြည်ကြီးငါးကထွက်တဲ့ သဘာဝမှင်ရည်နဲ့ ချက်ထားလို့ အရသာဆန်းပါတယ်။ အီတလီ gelato ရေခဲမုန့်တွေလည်း အရမ်းအရသာရှိလို့ စားကြည့်ကြပါ။
Venice ကို မျက်နှာဖုံးမြို့တော်လို့ခေါ်ပါတယ်။ မြို့ထဲ ဘယ်ဆိုင်ကြည့်ကြည့် အမျိုးစုံတန်ဆာဆင်ထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးလေးတွေ တွေ့ကြရမှာပါ။ Venice မှာလုပ်တဲ့ မျက်နှာဖုံးပွဲတော်က အရမ်းနာမည်ကြီးတာပဲတဲ့။ နှစ်စဉ် အီစတာပွဲတော်မကျင်းပမီ ရက်၄၀အလိုမှာ ပြုလုပ်တာဆိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာသွားရမှာပေါ့။ ပွဲတော် မသွားနိုင်ရင်တောင် မျက်နှာဖုံးတစ်ခုလောက် အိမ်မှာအလှထားဖို့ အမှတ်တရ၀ယ်သွားပါလေ။
ဒါတွေကတော့ သင်္ကြန်တွင်းသွားခဲ့တုန်းကပေါ်မူတည်ပြီး နုမြတ်သိသလောက်ရယ် နုမြတ်စိတ်ဝင်စားတာတွေရယ်ကို ပြန်မျှဝေတာပါ။ တခြားအချက်တွေလည်း ရှိဦးမှာပါ။ သိခဲ့ရင်လည်း ပြောပြပေးပါဦးနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်္ကြန်တွင်းသွားခဲ့တဲ့ ဥရောပ၈နိုင်ငံခရီးစဉ်ထဲက တခြားစိတ်ဝင်စားစရာတွေလည်း ရေးပေးဦးမှာဖြစ်လို့ Like နဲ့ See First လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်နော်။
This entry was posted in Europe, Natural Wonder, Travel, Uncategorized and tagged Europe, Experience, Nature, Nu Myat around the World, Travel. Bookmark the permalink.
← Taj Mahal, A Symbol of Love
World Smallest Country, Vatican City →